Portland Maine ọ dị mma maka ịgba igwe kwụ otu ebe? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Cgba gburugburu Portland Maine - otu esi edozi
Portland Maine ọ dị mma maka ịgba igwe kwụ otu ebe?
maka uchuMAGHACHIna ndị nlegharị anya nkịtị dị
Na-arụ ọrụịgba ígwèdị iche iche na ihe ndị na-agba ịnyịnya,Portlandakpọwo otu n'ime obodo ndị kachasị agba ígwè site na Magazin Mpụ.Mar 23 2020
Maine igwe kwụ otu ebe?
Mainebụigwe kwụ otu ebeala, nwere iwu steeti chọrọ ka onye ọkwọ ụgbọ ala kwenye ụkwụ 3 na ndị ọgba tum tum n'akụkụ okporo ụzọ.
Ebee ka m nwere ike ịgba okirikiri na Maine?
The kasị dị ịrịba ama Places kaOkirikiri na Maine
Ogige Ntụrụndụ Acadia. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-eche na Acadia National Park, guzobere na Mount Desert Island na DowneastMaine, O si n’oké osimiri bilie naanị maka iji ha.
Cozọ Okporo Backzọ.
Ogige Ugwu Bradbury.
Roozọ Ndagwurugwu Aroostook.
Ala ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ.
Ọkt 3 2017
Nwere ike ịnyịnya ígwè gafee Casco Bay Bridge?
Enwereigweuzoobeiheakwa, ma ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọalameeịkwanyereghị okporo ụzọ a ùgwù ma nwee ihe ọghọm. Oke ịgba ọsọgafeeiheakwaetinyere na 40MPH, agbanyeghị ọtụtụ ụgbọ ala na-aga n'elu.Gịnwere ike chọọ iji akụkụ ụzọ gaaigwe kwụ otu ebeon, n'agbanyeghị na nke a megidere iwu.
Ogologo oge ole ka okporo ụzọ Ọwụwa Anyanwụ dị na Maine?
IheTrazọ Ọwụwa Anyanwụbụ ihe eji eme ihe dị ka kilomita 62, nke na-abụghị moto, nke na-ejikọ Bug Light na Casco Bay, South Portland na Kittery,Maine.
Ogologo oge ole ka okporo ụzọ njem nke Ọwụwa Anyanwụ?
The kilomita abụọOkporo ụzọ njem nke ọwụwa anyanwụbụ ọmarịcha ọdụ ụgbọ mmiri Portland.
olee otú tụọ cadence ịgba ígwè
Kedu akụkụ nke okporo ụzọ ị kwesịrị ịgba igwe?
Mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ, a chọrọ ka ịnyịnya ígwè na-aga otu ụzọ dị ka ọsọ nke okporo ụzọ. Maka ndị anyị bi na United States, nke a pụtara ịnya n'aka nri oge niilen'akụkụnakwa iji ikiken'akụkụnke uzo ozo dika o kwere omume ma obughi ma o buru ihe adighi nma ime ya.15 jan. Ọkt 2018
Ogologo oge ole ka Ogologo Ugwu nke Ugwu?
IheUgwu nke Ugwudị ka ngalaba abụọ dị iche iche nke ihe ga - emecha bụrụ ihe karịrị 50-mile-ogologo ijesite na Fryeburg na Portland. Akụkụ ndịda na-agagharị maka ihe dị ka kilomita 6 n'etiti Windham na Standish; edere edere ke se ikperede ndisịm kilomita 4 ke Fryeburg ke adan̄a New Hampshire.
Nwere ike ịnyịnya ígwè n'elu San Mateo Bridge?
Nke ahụ pụtara isii n’ime asaa steeti nwereàkwà mmiri naiheMpaghara Bay, gbakwunye Ọnụ Goldenzọ Goldenmá ỌlaedoÀkwà mmiri, ha niile nwere ụdị ụfọdụigwema ọ bụ ndị na-agafe agafe. Naanị njikọ na-enweghị ụzọ dị otú a: ọdịda anyanwụ nke BayÀkwà mmirinaSaint Matthew-HaywardÀkwà mmiri.bọchị 2020
Ogologo oge ole bụ okporo ụzọ okporo ígwè Mass Mass?
IheOkporo ụzọ okporo ụzọ Mass Centralbụru nke emechaaokporo ụzọ ụkwụsi Northampton,MassachusettsBoston tinyere mbụ nri nke ụzọ nkeMassachusetts Central ụgbọ okporo ígwè. Mgbe ọ bụla, ọ ga-aga kilomita iri na itoolu na anọEtiti Massachusettsna Akwa Boston.
Ebee ka ebe kachasị mma iji igwe kwụ otu ebe na Portland Maine?
Casco Bay na-enye ohere na-akparaghị ókè ịnụ ụtọ oke osimiri mgbe ọtụtụ ọdọ mmiri na ugwu dị n'ime ụzọ dị mfe. Portland nwere ezigbo igwe kwụ otu ebe na ọtụtụ ebe mara mma ịnọ. Nke a bụ ndepụta nke ụzọ ịgba ọsọ na-ewu ewu. Okporo Promzọ Njegharị Ọwụwa Anyanwụ.
Gịnị ka Portland Bicycling Club na-emere ndị obodo?
Na mgbakwunye ịbụ klọb ịgba ịnyịnya ígwè nke Portland, Portland Bicycling Club na-akwalite ịgba ịnyịnya ígwè na ndị ntorobịa na ndị obodo site n'inye ọtụtụ uru na-enweghị uru na inye oge nye ndị otu dị ka Community Cycling Center, ndị Enyi nke Historic Columbia River Highway, Bikes maka Ndi mmadu, na Street Trust.
Ebee ka baycycle ụgbọ mmiri dị na Portland Maine?
Isesgbọ mmiri nwere ebe kachasị oche 15, a ga-ebu ya ụzọ tupu, ma a na-enye ha na elekere 11 nke ụtụtụ (naanị izu ụka), 1 pm, 3 pm, 5 pm, na 7 pm site na Bell Buoy Park, nke dị n'agbata Casco Bay Lines na Flatbread Pizza na Commercial Street, Portland, Maine. Ise Nyocha Star na TripAdvisor!